Wiil Soomaali ah oo isku dilay dalka Qubrus – WARSOOR
Wiil Soomaali ah oo isku dilay dalka Qubrus
Muqdisho – (warsoor) – Wiilkan Dhalinyarada ah oo kamid ahaa Soomaalida kunool Dalka Qubrus ee ka tirsan Qaaradda Yurub ayaa lagu soo waramaya in uu isku dilay magaalada Larnaaka ee dalkaasi Talaadadii aan soo dhaafnay kadib markii loo diidey magan gelyo.
Soomaalida kunool Jasiiradda Qubrus ayaa sheegaya in sababaha loo aaneynayo in uu is dilo wiilkaasi oo lagu magacaabi jirey Max’ed Daahir Dayax ay tahay kadib markii uu la kulmey dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ah, islamarkaana loo diidey in uu lamidoobo qoyskiisa oo kunool dalka Britain.
Booliska dalkaasi Qubrus ayaa xaqiijiyay in wiilkaasi oo isaga is diley kadib maaritaano ay sameeyeen,waxaa lagu qayaasayay da’ahaan 18 ilaa 19 qof
Cabdalla Max’ed oo kamid ah Soomaalida kunool Dalka Qubrus ayaa ka warbixiyay dhcadadaasi oo naxdinta ku noqotay Soomaalida dalkaasi ku dhaqan.
“Waxaa lagu magacaabi jirey wiilkaasi Max’ed Daahir Dayax, wuxuu kamid Muqdisho, aniga muddo 1 sano ayaan is garaneynay, wuxuu kunoolaa dalkani, runtii waxyaabaha hadda loo sababaynayo in uu isdilo waxay tahay in laga hor istaagay in uu qoyskiisa oo kunool Ingiriiska uu lamidoobo, taasi oo in muddo ah uu ku haminayay,Dalkani runtii ma daryeelo dadka Qoxootiga ah, wiilkani muddo ayuu I weydiin jirey goormaan shaqo heleynaa, goormaan waxbarasho heleynaa”, Ayuu Yiri Cabdalla.
Ciidamada booliska Dalkaasi Qubrus ayaa wada baaritaano ku aadan sababta keentey dilka wiilkaasi,iyadoo lafilayo in meydkiisa halkaasi lagu aaso.
Dalkaasi Qubrus waxaa kunool Soomaali badan, kuwaasi oo isugu jira, qoxooti, Deegaan iyo kuwo kale oo waxbarasho ahaan u jooga, waa Jasiirad kamid ah Yurub waxay ku dhowdahay dalka Turkiga.
Shirkadda Horn Drilling Company oo Hawlgalo Sahaminta Biyaha ah ka ku Tegay Degaan ku Yaal Gobolka Togdheer
Madaxweyne Farmaajo oo dadka Soomaaliyeed ugu Hambalyeeyay Ciida Carafo
Sanadka bilawga ah ee 2022 haddii uu nasiib watay wiilkaan Ciraaqiga ah baa helay
Waxa uu guursaday 36 sano jir Mastar ka diyaarisay daraasadaha dawladnimada oo uu dhalay suldaanka dunida ugu hodonsan. Waxa ay xafladda arooskiisu socotay muddo todoba maalmood ah, waxaa lagu qabtay…
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland oo Xafiiskiisa ku qaabilay Wafti ka socday dalalka Midowga Yurub
HARGEYSA – (WARSOOR) – Guddoomiyaha Maxkamadda Sare aha Guddoomiyaha Guddida Cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland Aadam Xaaji Cali Axmed ayaa khamiista maanta xafiiskiisa ku qaabilay waft I balaadhan oo ka socday dalalka…